वैदेशिक रोजगारमा हुनेले हेर्नै पर्ने, श्रम स्वीकृत बारे आयो यस्तो खबर ! - ramechhapkhabar.com
वैदेशिक रोजगारमा हुनेले हेर्नै पर्ने, श्रम स्वीकृत बारे आयो यस्तो खबर !
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा बायोमेट्रिक गरेको छैन भने श्रम नवीकरण गर्न नेपाल नै आउन पर्छ ।
बायोमेट्रिक दर्ता भनेको विदेश जाने बेलामा श्रम स्वीकृति लिँदा श्रम कार्यालयमा श्रमिकको आँखा र औँठाछापको फोटो मेसिनले स्क्यान गरेर अनलाइन सिस्टममा गर्दा गरेको हुनुपर्छ । यदि यसो गरेको छ भने अनलाइनबाट आफू रहेको देशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ ।
अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति लिन होस् या भौतिक रूपमा नै उपस्थित भएर लिँदा होस् अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत टोकन अर्थात् समय लिन पर्छ । यदि भौतिक रूपमा नै श्रम कार्यालयमा उपस्थित भएर पुनः श्रम स्वीकृति लिने हो भने पहिला अनलाइनमार्फत टोकन लिनुपर्छ ।
यस्तो टोकन आफूलाई पायक पर्ने श्रम कार्यालयको लिन सकिन्छ । टोकनमा तोकिएको मितिमा कार्यालयमा उपस्थित भई पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिन्छ । अनलाइनमार्फत हो भने टोकनको समयदेखि ३ देखि ४ दिन लाग्ने विभागले जनाएको छ ।
यदि बिदामा नेपाल आउनुभएको छ भने टिकट काट्नुअघि आफ्नो श्रम अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुपर्छ । विदेश उड्ने मितिले ९० दिनको श्रम अवधि नभएमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइँदैन ।
मलेसिया सरकारले जनवरी देखी ठूलो संख्यामा छापा हान्ने उद्घोष, डिसेम्बर ३१ सम्म छुट !
मलेशिया कम्पनीमा अ’वैध विदेशी कामदार भएका रोजगारदाताहरूले गृह मन्त्रालयको पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रममा भाग लिनको लागि यो वर्षको अन्त्य सम्म को समय रहेको छ, दतुक सेरी हमजाह जैनुदिनले भने।
गृहमन्त्रीले जनवरी १ मा, आफ्नो मन्त्रालय र मानव संसाधन मन्त्रालयले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्न ठूलो मात्रामा छा’पा अभियान सुरु गर्ने भएका हमजाहले बताए।
“पुनर्प्राप्ति योजना भनेको रोजगारदाताहरूका लागि गै’रकानूनी विदेशी कामदारहरू भर्ती गर्ने अवसर हो जसले देशका सबै व्यक्तिहरू कानुनी र कागजातमा छन् भनी सुनिश्चित गर्न कार्यक्रममा दर्ता गर्ने अवसर हो।
“हामी रोजगारदाताहरूलाई यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन चाहन्छौं किनभने अ’वैध कामदारहरूले समस्या निम्त्याउँछ। “हामीले जब विदेशी कामदारहरूलाई खोप लगाउने प्रयास गर्यौं, अ’वैध आ’प्रवासीहरू लाई खोप दिन गाह्रो भयो।
“नतिजाको रूपमा, केही कागजात नभएका आप्रवासीहरू को’विड को कारणले म’ रे, र यसले थप सम’स्याहरू निम्त्याउँछ। “त्यसैले डिसेम्बर ३१ भन्दा पहिले आफ्ना कामदारहरूलाई पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रममा दर्ता गराउनुहोस्।
“त्यसपछि, अ’वैधानिकहरूलाई नि’यन्त्रण गर्न ठूलो मात्रामा छा’पा अपरेशन हुनेछ,” हमजाहले यहाँ मानव संसाधन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा भने। मानव संशाधन मन्त्री दातुक सेरी एम. सरावननसँगको संयुक्त भेटपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रममा दुई भागहरू थिए – श्रम र स्वदेश फिर्ता।
निर्माण, उत्पादन, वृक्षारोपण, कृषि र सेवा जस्ता निश्चित क्षेत्रहरूमा रोजगारदाताहरूलाई कानुनी रूपमा गै’रकानुनी रूपमा विदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी दिन अनुमति दिन “श्रम” पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो।
“स्वदेश फिर्ता” पुन: क्यालिब्रेसन कार्यक्रम हो जहाँ कागजातविहीन आप्रवासीहरूले आफ्नो मातृभूमि फर्कन स्वयम्सेवा गर्न सक्छन्।